Israel ichigadzirira kugamuchira vashanyi veGulf
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » Israel ichigadzirira kugamuchira vashanyi veGulf
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Israel Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Saeed Mohammed (akapfeka zvichena) naRoss Kriel (wechipiri kubva kuruboshwe) vanoratidzwa munaGunyana 17 mushure mekusaina chibvumirano chekupihwa kwekudya kwendege kosher kumuzinda weDubai weEmirates Flight Catering. MuUS-bhizinesi muzvinabhizimusi Eli Epstein anoratidzwa kuruboshwe, uye Rabhi Yehuda Sarna, mukuru rabhi weUAE, ari kurudyi.
Israel neUnited Arab Emirates (UAE) vari mumatanho epamberi ekumisikidza nzira dzendege dzakananga uye kupedzisa zvibvumirano zvepasirese zvemavisa evashanyi, Ministry yeIsrael Yezvekuratidzira yakazivisa.
Mazuva mashoma chete mushure mekusaina chibvumirano cherunyararo, nhoroondo yezvekushanyirwa yeIsrael yatove kutaurira mafaro kubva kuEmirati vashanyi vekushanya, vamiririri vekufamba uye mahotera vachida kubatirana pazvirongwa zvevafambi veIsrael neGulf.
Kunyangwe ichienderera Covid-19 denda, Ministry yeIsrael Yekushanya iri kugadzirira izvo zvainotarisira zvicharatidza shanduko yechiitiko chevashanyi mudunhu iri.
Mune chirevo, hushumiri hwakati chibvumirano cherunyararo chakasainwa kuWhite House svondo rino "chinogadzira mukana wakakura" wekushanya pakati peIsrael neUAE uye chakasimbisa kuti kutaurirana kuri kuitika "nekukurumidza".
"Zvibvumirano zvine chekuita nekuvhurwa kwenzira dzendege dzakananga uye mavhiza ekushanya zviri muzvikamu zvavo zvepamusoro," hushumiro hwakati. "Tichifunga nezvekurudziro kumativi ese ari maviri, zvinotarisirwa kuti chibvumirano pakati pemapato panyaya idzi chichagadziriswa munguva pfupi iri kutevera."
Vamiriri veMinistry pamwe nehunyanzvi kubva kumasangano akazvimirira voga vari kuita hurukuro nevamwe vavo veAUE pazvinhu zvakasiyana siyana zvebhizimusi zvine chekuita nendege, kushambadzira uye mapakeji akabatana ekushanya.
"Imwe yenyaya dzakabvumiranwa nevamiriri vehunyanzvi kusimudzira nekukurumidza kushambadzira pamwe nenyika yechitatu - Middle East mapakeji ekufambisa - ayo achasanganisa kushanya kuAud Dhabi, Dubai, Jerusarema neTel Aviv, nendege dzinopeperetsa Saudi Arabia, ”Ministry yakawedzera ..
Vhiki rapfuura, ndege yendege yeIsrael Israir yakazivisa kuti yaizopa nendege yakananga kuAud Dhabi ichimirira mvumo kubva kuzviremera zveEmirati neIsrael. Zvichakadaro, El Al uye neAFA-based carriers Etihad Airways neEmirates vanonzi vachaparura nzira dzeTel Aviv-Dubai mumwedzi inotevera.
Nezve kuenda kuIsrael, Ministry of Tourism yakaratidza kuti yaive yekugadzira mapakeji akagadzirirwa vashanyi veEmirati mukuwedzera mukugadzira webhusaiti yekutengesa mutauro wechiArabic. Mutumbi wehurumende wakati unoshuvira kufambira mberi nezvirongwa zvawo kutanga kwegore rinouya uye kuti waitarisira "huwandu hwakakwira" hwevafambi vanobva kuUAE - coronavirus ichibvumidza.
“Israel ine zvakawanda zvekupa vashanyi veEmirati, kubva kunzvimbo dzinoyera mukati nekukomberedza Jerusarema senge Tembere yeGomo [uye Aqsa Mosque] mukomo, Gomo reMiorivhi uye Bako reMadzitateguru [muHebroni] kunzvimbo dzekuchera matongo dzakapfuma munhoroondo kutenderera nyika, ”rakadaro gurukota mumashoko aro. "Israel ine chimiro chine mutsigo uye chevaraidzo, inopa zviitiko zvakasiyana zvekugadzirira zvinosanganisira halal sarudzo, uye chiArabic chinotaurwa zvakanyanya."
o ita kuti vashanyi veIsrael vanzwe kugamuchirwa, veEUE-based revashanyi vashanyi, ndege uye mahotera ari kushanda kuti ave nechokwadi chekuti dzinoverengeka kosher chikafu sarudzo dziri patafura.
Kusvika parizvino, Emirates Flight Catering nemusi weChina yakazivisa kuti yakabatana neCCL Holdings kugadzira nzvimbo yakazvipira yekugadzira chikafu chikafu. Mubatanidzwa uyu, unonzi Kosher Arabia, unotarisirwa kutanga muna Ndira.
Emirates Flight Catering ndeimwe yemabasa makuru ekudyira pasi rese uye inoshanda pamwe neanopfuura ndege zana. Mukuru wayo mukuru, Saeed Mohammed, akaita chibvumirano naRoss Kriel, muvambi weCCL Holdings uye mukuru weJuda Council yeEmirates, purojekiti iyi.
“Kudya kwese kosher kwendege dzese dzeEmirate Airlines dzichagadzirwa nezvigadzirwa zvekukosher zvichangoburwa padanho repamusoro. Kudya uku kuchange kuchigadzirwa zvizere kuDubai uye chinangwa ndechekugadzira chikafu chepamusoro soro munyika, ”akadaro Kriel.
Mamwe makambani ekudyira kosher ari kutevedzerawo.
David Walles, maneja maneja uye mukuru mukuru weKosher Travelers, anga ari mubhizinesi kwemakore gumi nemasere. Kambani yake inopa kosher mapakeji ezororo pamwe ne Deluxe cruises. Pamwe chete nekambani yeDhailand-based catering Elli's Kosher Kitchen, Kosher Travelers ichagadzira "kosherati" dhizaini cuisine: chinyakare chikafu chechiJuda neEmirati twist.
Elli Kriel, muridzi weKosher Kitchen yaElli nemukadzi waRoss Kriel, akaudza The Media Line kuti anga ari mubishi kunyoresa nzvimbo yekutengesera yekicheni hombe yekosher iyo inomugonesa kukwidza nekugarisa vafambi nevazhinji vebhizinesi vanotsvaga kushanya kana dzangobhururuka nendege dzakananga.
Israeli Yevashanyi Vashandisi Vanoshuma 'Kudururwa Kwekudziya'
Vaya vanogona kutenga hunyanzvi hwekubhadhara jeti yakavanzika vanogona kuita rwendo rwekuUAE - zvirinani dzidziso - izvozvi.
Aviad Amitai muridzi weVIP Travel Agency, iyo inopa vatengi vekumusoro-kumagumo. Iyo kambani inopa yakavanzika majeti kune vese veIsrael neEmirati vamiriri ve "chete" madhora makumi mana ezviuru zvevanhu vasere kuenda-kudzoka.
"Tiri kugadzirira kunotora nhumwa kubva kuUAE pamwe nekubatsira vamiriri vebhizimusi veIsrael kuti vaende kuUAE," Amitai akaudza The Media Line. "Tatova nehukama hwemberi nevanhu vakuru muUAE neBahrain nezvenyaya iyi maererano nezvibvumirano nemahotera neindasitiri yevashanyi ikoko."
Sekureva kwaAmitai, VIP Travel Agency yakashanda pamwe chete nemhuri yeumambo yaAud Dhabi uye yakabatana nekambani yakazvimiririra yekuvhiya ndege kuenda nekudzoka kuGulf state.
Ehezve, vashanyi vazhinji vangangosarudza dzimwe nzira dzakaderera.
Mune iyo tsinga, vashanyi vekuIsrael vashanyi vatotanga kuisa hwaro hwezvinhu zvitsva. VaMark Feldman, mukuru mukuru weZiontours iri muJerusarema, vakaudza The Media Line kuti hapana kushomeka kwekuda.
"Va [Emiratis] vanga vachizvishingisa kusvikira vamwe vavo vekuIsrael, kutopfuura isu," akadaro Feldman. "Vafambi vekushanya, vashanyi uye mahotera ari kusvika kwandiri nekusaedza kuti ndiwane musika weIsrael."
Feldman anoidaidza kuti "kudururwa kwekudziya" kwaaisambotarisira - kana ruzivo.
“Handisati ndamboona zvakadai. Izvi hazvina kuitika neEjipitori kana Jorodhani, ”akadaro.
Parizvino, iyo UAE iri kutungamira mubhadharo maererano nekubata musika weIsrael, neBahrain iri kumashure.
Vafambi vekuzorora veIsrael vakaratidza kufarira kushanyira Dubai neAud Dhabi - zvakanyanya zvekuti Feldman akamanikidzwa kugadzira rondedzero yekumirira.
"Dai taive nendege uye chero muIsrael aigona kuwana vhiza, taigona kunge tichizadza ndege mazuva ese," akadaro.
Kune rimwe divi, vashanyi veEmirati vanoratidzika kunge vakagadzirira kugadzira musika mutsva muIsrael mumwedzi iri kuuya.
Benny Scholder ndiye director weNorth America kutengesa kweTel Aviv-based Kenes Tours, anoshanda anoshanda mukushanya kwakazara kuIsrael. Scholder akaudza The Media Line kuti anotarisira kuti vezvemabhizimusi veEmirati vave pakati pevafambi vekutanga kusvika, kunyanya sekushanya kwekuzorora kwakatora denda iri.
"Vanoda chaizvo kuva pano, kuti vadzidze nezve nyika yavakambobvumidzwa, uye vakaratidza kufara kuziva izvo zvinogona kupihwa neIsrael," akadaro, achiwedzera kuti vaKenen vanogadzira mafambiro etsika evatengi.
SaZiontours, Kenes akagamuchira zvirevo zvekudyidzana kubva kuUAE-based vashanyi vanoshanya. Zvakare, kambani iri kutarisa mukugadzira zvakasarudzika zviitiko zvekufamba zvevatengi veNorth America izvo zvinosanganisira kushanya kune vese Israel neGulf, ese ari muhomwe imwe.
Kunyangwe ichi chivimbo, Scholder zvakadaro anoyambira kuti dzimwe nyaya dzichiri mudenga. Kune rimwe, vafambi veEmirati vane indasitiri yakasarudzika yakasarudzika uye vakajairira basa rakanakisa, iro ravanotarisira kusangana naro muIsrael. Kumwe kunetsekana muindasitiri yekufamba kwakabatana nemitemo yekuchengetedza pazviteshi zvendege zveIsrael.
"Vanhu vazhinji vakaratidza kunetsekana mukudyidzana kwavo kuchave pavanosvika panhandare," akadaro Scholder.
"Vanobva kuArab," anodaro. “Rudzii rwezvishandiso zvichavepo kuona kuti havasi kubatwa zvisina kunaka nezviremera panhandare? "Vanozotariswa nekufungirwa nekuti vaenda kune dzimwe nyika munzvimbo dzavari idzo dzatisina hukama nadzo, uye zvingakonzera kusawirirana panhandare?"
Zvakadaro, Scholder anoramba kurega kunetseka kwakadaro kudzikisira vimbiso yakazara yemukana.
"Tese takangomirira, asi tiri kufara," akadaro. "Iri idanho rakakura munzira kwayo."
Ichi chinyorwa chakaburitswa pakutanga neMedia Line.
Yakagamuchirwa Vaccine Kusapindirana Kunogona Kunonoka ...
Ndege dzeUS dzingangoda kudzoreredza mari ye ...
Romance Guta reIndian Ocean